Home News Puntland oo war horleh kasoo saartay Dagaalka ay kula Jirto Soomaaliland!!
Puntland oo war horleh kasoo saartay Dagaalka ay kula Jirto Soomaaliland!!
Golaha wasiirada maamulka Puntland oo maanta shir ku yeeshay magaalada Garowe ayaa ku shaaciyeyin duullaan lagu soo qaaday Puntland, isla markaana caburin lagu hayo shacabka Magaalada Laascaanood.
War-saxaafadeed ka soo baxay shirka oo uu guddoomiyey madaxweyne C/weli Gaas ayaa lagu sheegay in maamulka Somaliland uu duullaan gardarro ah ku hayo degaanada Puntland, waxaana dadweynaha Puntland loogu baaqay inay is garab taagan dowladooda iyo ciidamadooda u diyaarsan difaaca.
Dhinaca kale shirka Golaha wasiirada Puntland ayaa lagu dalbaday dhismaha Hannaan Caddaaladeed oo heer Federaal ah.